Alonso Oo Diiday Inuu Ka Fadhiisto Ciyaaraha Caalamiga Ah
HomeWararka MaantaAlonso Oo Diiday Inuu Ka Fadhiisto Ciyaaraha Caalamiga Ah
Halyeyga khadka dhexe ee wadanka Spain, Xabi Alonso ayaa diiday inuu xaqiijiyo inuu ka fadhiisanayo ciyaaraha caalamiga ah kadib markii ay ceebi ka raacday koobka adduunka ee sannadkan.
Xulka Spain oo haysta koobka adduunka ee hadda lagu tartamayo, awoodna u yeelan waayey inuu difaacdo, iyadoo lagu khaarajiyey labadii ciyaarood ee ugu horreeyey Holland (5-1) iyo Chile (2-0), ayaa waxa si gaar ah dhalleecayn loogu jeediyey Xabi Alonso, waxaanay taasi keentay hadallo la isla dhex maray oo sheegayay in uu ka fadhiisanayo ciyaaraha qarankiisa.
Xiddigan khadka dhexe ee difaaca xigta uga halgama naadiga Real Madrid, waxa uu beeniyey jiritaanka wararkaas, waxase uu diiday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa xulka qaranka, waxaanu yidhi “Wali ma joogo heer aan go’aan ku gaadho, waxa aan doonayaa kaliya in aan tartanka dhamaysto (Koobka adduunka ee ay ka hadheen), aan fasax u baxo, aan iska yara nasto dabeetana aan markeeda ka hadlo, haddase ma taabanayo mowduucaas”.
Alonso oo ay hadda da’diisu tahay 32 jir ayaa waxa uu dhawaan cusboonaysiiyey heshiiskii uu kula jiray Real Madrid, waxaanu ku daray laba sannadood oo kale oo ku dhamaanaya 2016, lamase oga in go’aan uu ku gaadhi doona in uu ka fadhiisanayo ciyaaraha caalamiga ah.
Dhinaca kale, xiddiga khadka dhexe ee Spain iyo Barcelona, Xavi ayaa mar horeba ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka fadhiisto ciyaaraha dalkiisa, laakiin tababare Del Bosque ayaa ku qanciyey inuu ka qayb qaato koobka adduunka, waxaana la filayaa in marka uu dalkiisa ku laabto maalmaha soo socda uu si rasmi ah u iclaamiyo inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah.